Banyere Anyị - Dongguan City Baby Ngwá ụlọ Co., Ltd.
Somụaka sofa oche
Ogwe ụfụfụ zuru ezu
Bọọlụ udi Sofas
Igbe nchekwa na oche
Fatọ sofa nkebi
Akwụkwọ ụmụaka na-amụ ije
Metal Pet akwa
osisi arịa ụlọ
Dongguan City Baby Furniture Co., Ltd. e guzobere Dongguan na 2007, na ụdi Dongguan City BaoFa Ngwá ụlọ Co., Ltd. na Dongguan Pinweitongju Ngwá ụlọ Co., Ltd. bụ ndị metụtara ụlọ ọrụ n'okpuru otu management. Otu ụlọ ọrụ anyị nwere ọpụrụiche n'ịzụlite na n'ichepụta akwa ụmụaka na arịa ụlọ, dịka ụmụaka Sofas, oche ụmụaka, Childrenmụaka ụmụaka, Ottomans, cholọ akwụkwọ ọta akara Sofa, Cmụaka ụmụaka na anụ ụlọ Sofa, Iron Pet Beds ... ect.
Anyị wuru ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a na 20000 sqm, yana otu ndị ọrụ R&D magburu onwe ya na ihe karịrị ndị ọrụ 300 nwere nkà na Dongguan, China.
Anyị guzobere ngalaba ọrụ dị ka ISO9001: 2015, nke nwere mmesi obi ike, nyocha dị mma, QE, IQC, IPQC, FQC na OQC. Certificatelọ akwụkwọ nyocha akwụkwọ ụlọ ọrụ dị maka: SMETA, ICTI, WCA, GSV, SQP… wdg. Karịsịa, anyị bụ ndị mbụ mmepụta ihe nke nyere ndị Disney rụpụtara ikike nke ụmụaka upholstered ngwá ụlọ na OEM n'ihi na nke a nnukwu ika n'elu 9 afọ ruo ugbu a. anyị nwekwara obi ụtọ ịbụ ndị na-ebu ngwaahịa nke ụlọ ọrụ TJX, Melissa & Doug, Aldi, Dunelm, Jollyroom ... ect. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị agafeela Walmart Audit ma nyekwa ya Walmart sopị ID.
Anyị na-enye OEM & ODM & Ọrụ ahaziri iche, n'efu na ụdị nke anyị "KOOPO" "KOPOO EZE" "BABYLAND" maka ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. All ụdị kwekọrọ na asambodo nke TSCA, EN71, ASTM, FSC, CPSIA ... ect.
Companylọ ọrụ anyị raara onwe ya nye iji mepụta ngwaahịa ọhụụ site na iji atụmatụ ọhụụ na teknụzụ ọhụụ, gbalịsie ike ịnye ndị mmadụ ezigbo ngwaahịa na ọnụahịa dị ọnụ ala, weta ụmụaka na anụ ụlọ ibi ndụ dị mma, ma nwee obi ụtọ n'ụlọ gị.
Mmadụ Bịa na ileta anyị factory ma ọ bụ na-akpọ anyị n'oge ọ bụla!